Jibsoo Waliigalaa - LibreOffice Help
1 Sirna Lakkoofsootaa
3 Kuusdeetaa SQL / Kaadimaa SQL
5 Olkaa'insa Sadhatawaa fi Ofdanda'aa
6 Hiikamtootaa fi Darbamtoota
8 KuusDeetaa Firoomaa
10 Furtuu dursaa
16 Baafata Halqaraa
20 Qabduu qaamii
22 Teesumaa Barruu Xaxaa (CTL)
23 Wanta Bézier
26 Hidhuu (OfDhoksi)
27 Takkaan fi Akkaataan Dhangeessuu
Baafata halqara wantaa kakaasuuf, jalqaba wanta fiachuufleftqabduu hantuutee waliin cuqaasi, itti aansuudhaan yeroo furtuu Ctrl ykn ajajaa fi furtuuwwan dirqalaa gad qabdu, qabduu hantuutee mirgaa cuqaasi. Baafatni halqaraa gariin osoodhuma wanti hin filatamiin illee waamamuu danda'u. Baafatni halqaraa LibreOffice keessatti iddoo maratti argama.
Foddaawwan gariin LibreOfficekeessaa, fakkeenyaaf foddaa Haalataalee fi Dhangeessuu akkasumas Naanna'aa foddaawwan "hidhamuu danda'an" dha. Foddaawwan kana siiqsuu, hagamtaa isaanii jijjiiruu ykn qareetti hidhuu dandeessa. Qaree kamiinuu foddaawwan hedduu walirratti ykn walbukkeetti hidhuu dandeessa itti aansuun sararoota handaaraa siqsuun gita sadhaatawaa foddaawwanii jijjiiruu dandeessa.
Galmee haalataalee malee yoo dhangeessite, dhangeessuu "takkaan" jedhama. Barruu yookaan wantoota kan biroo, kan akka godayyaawwanii ykn gabateewwanii, amaloota adda addaa kallattiin takkaan fayyadamuun foyyeessuu jechuu dha. Dhangiin kun naannoo filatame qofaaf fayyada fi jijjiiramootni hundi qofaatti uumamuu qabu. Karaa biraatin, Haalataaleen barruu irratti kallachaan hin fayyadan, garuu foddaa Haalataalee fi Dhangeessuu irratti qindaa'un hojiirra oolu. Yeroo haalataa jijjirtutti bu'aa argattu keessaa tokko, kutaawwan galmee kan haalataan irratti ramadamu hundi al tokkoon fooyya'a.
Dhangeessuu kallachaa galmee kee keessaa furtuuwwan qaxxaamuraati Ctrl+A itti aansitee Dhangii - Dhangeessuu Durtii filachuun haquu dandeessa.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Common/General_Glossary/om&oldid=1324944"
This page was last edited 16:00:16, 2016-06-18 by LibreOffice Help user WikiSysop.